Waaheen Media Group » 2013 » June » 2
Browse:Home 2013 June 02	Daily Archives: 11:05 pm	dhagayso heestan
Labadaa Qalad Aan Daba Qabatayno. W/Q: Prof. Abdi A. Jama
Waa mabaadida yacyacoodka ah iyo reer waqooyinimada shaashowday. Aan mid mid u kala qaadno. Mabaadi’da aynu ka dhignay yac-yacoodka. Markii aynu dalka soo galay mid weynu ku guulaysannay illaa xad,… Read more »
Horta waa yaabe walaweyntu ma mara-boobaa‏
Sunaha Dawladnimo wuxuu farayaa madaxda qaranku inay meel kasta oo ay ku jirto danta qaranku tagaan, waana hawshii ay u hayeen ummada.Hadii madaxdu ayna dhaq-dhaqaaqin oo meeshii dantu gashaba ayna… Read more »
Ka joog kulmiyoow ka joog‏
sida la og yahay dadka reer sland waa ummad daal ,diif iyo dacas badani soo maray,halgan badan iyo dhiig daatayna loosoo galay,ilaa haatan aqoonsi caalamiya kamay helin beesha caalamka,waxa ugu… Read more »
Kooxda Gobolka Maroodi-jeex oo 2-1 kaga badisay Kooxda Gobolka Saraar
Hargeysa(Waaheen) waxa maanta si rasmi ah uga furmay Garoonka Kubadda Cagta Caasimadda Hargeysa Ciyaarihii Goboladda Dalka oo ay ka soo qayb galeen dhamaan Goboladda ay Somaliland ka kooban yihiin. Ciyaaraha… Read more »
Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo wefti uu hogaaminayo oo goor dhaweyd Hargeysa soo gaadhay
Hargeysa(Waaheen) Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo koox uu hogaaminayo ayaa goor dhaweyd ka soo dagay Madaarka Hargeysa ee Cigaal International Airport. Professor Samatar markii uu gegida soo caga dhigtay ee… Read more »
Madaxweynaha Somalia oo la kulmay Guddoomiyaha Hay’ada Xidhiidhka Caalamiga ee Japan (JICA)
Yokohama(Waaheen) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Hassan Sheikh Mohamud ayaa maanta kulan gaar ah la qaatayAkihiko TANAKA oo ah Guddoomiyaha Hay’ada Xiriirka Caalamiga ee Japan (Japan Internatioanal Cooperation Agency (JICA)). Labada mas’uul… Read more »
Xarunta Human Rights Center oo xad Gudub ku tilmaantay xadhiga Wariye Cortoons-te ah
Hargeysa(Waaheen) Xarunta Human Rights Center ayaa qoraal ka soo saartay Wariye Cartoons-te ah oo lagu magacaabo C/rashiid Muxumed Qalinle oo ay Xukuumadda Somaliland ku xidhay magaaladda Gabiley. WarsaxaafadeedXadhiga Cabdirashiid Muxumed… Read more »
Dhalinyarada Reer Burco oo shaqo la’aan awgeed Maqaaxiyaha boobaya
Burco(Waaheen) Tuugo boob ah oo aan nooceeda hore loo arag ayaa beryihii ugu danbeeyay Magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer dilaacayday,waxaana maqaaxiyaha shaaha lagu cabo iyo goobo ka mid ah… Read more »